ध्यान दिनुहोस् मात्र यी ३ कुराहरु, मल्नेछ हरेक काममा सफलता !! | सुदुरपश्चिम खबर
ध्यान दिनुहोस् मात्र यी ३ कुराहरु, मल्नेछ हरेक काममा सफलता !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : भदौ १९, २०७८ 7
पहिलो सुत्र : जिम्मेवारीको शक्ति सम्झनु
तेस्रो सुत्र : ध्यान राख्नुहोस् जीवन चुनावको परिणाम हो
त्यसैले तपाई कहिलै अरुप्रति निर्भर नरहनुहोस्। यदी आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउन चाहनुहुन्छ भने आफू यसका लागि सधै तयार रहनुहोस्। नयाँ पुस्ता बाट सभार